म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! – News543Online
March 6, 2021 adminLeaveaComment on म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला !
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापनजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ
कन्चनको ,,अप्रेसन सफल ! घाटिमा प्वाल पारियो हेर्नुहोस भिडियो
रचना रिमालले जीवनको पहिलो अवार्ड0 पाएकी छिन् हार्दिक बधाई तथा शुभकामना